UMengameli uzonikela ngemiholo yakhe yaminyaka yonke | News24
UMengameli uzonikela ngemiholo yakhe yaminyaka yonke
Washington - UMengameli omusha waseMelika, uDonald Trump, uzonikela ngemiholo yakhe yaminyaka yonke engu-$400 000 ekhaya lezintandane, kusho omkhulumelayo, uSean Spicer, ngoMsombuluko – futhi ufuna nokuthi abezindaba, nahlale ebagxeka, ukuthi bamsize akhethe ukuthi le mali izosebenza kuphi.
“Inhloso kaMengameli ukunikela ngomholo wakhe njalo ekupheleni konyaka,” uSpicer utshele izintatheli esithangamini sabezindaba.
“Wenza isithembiso kubantu baseMelika.
OLUNYE UDABA: UsenguMengameli usomabhizinisi waseMelika, uTrump
“Ucele ngomusa ukuthi nonke (abezindaba) nisize ekunqumeni ukuthi iya kuphi (imali),” uqhube kanjalo – nokuyisitatimende esingajwayelekile kuleli Hhovisi likaMengameli njengoba selidume ngokuba nobudlelwano obungebuhle nabezindaba.
Lo somabhizinisi, onomnotho olinganiselwa ezigidigidini, wakusho kaningi ngesikhathi ekhankasela isikhundla sokuba uMengameli waseMelika ukuthi akahlelile ukuthatha umholo.
Omengameli bangaphambilini okubalwa kubo uHerbert Hoover kanye noJohn F Kennedy nabo banikela ngemiholo yabo emakhaya ezintandane.